पानीजहाज अध्ययनसमेत छैन तर, प्रधानमन्त्रीले निम्तो गरिसके| Nepal Pati
पानीजहाज अध्ययनसमेत छैन तर, प्रधानमन्त्रीले निम्तो गरिसके
काठमाडौं । पानीजहाजको कुरा गर्दा बाल्टीमा पानी राखेर डुंगा चलाउँदै उडाएका छन्, अब हिँड्दाहिँड्दै हनुमाननगरबाट पानीजहाज चल्छ, दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा सन् २०१८ सम्म भ्याइएन भने सन् २०१९ को पुस १६ लाग्ला, तर स्टिमर चढेर कोलकातासम्म जान निम्ता छ साथीहरूलाई । नयाँपत्रिकाबाट
प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै घोषणा गरिसके– सरकारले पुससम्म पानीजहाज ल्याउँछ । तर, पानीजहाज ल्याउने र चलाउने मन्त्रालय वा विभाग कुन हो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन । ऊर्जा तथा जलस्रोतले हो कि पर्यटन तथा संस्कृतिले ? यातायात तथा पूर्वाधारले हो कि वाणिज्य तथा आपूर्तिले ? सबै मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्दा कसैलाई पनि थाहा छैन । नेतृत्व गर्ने निकाय नै नभएकाले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कसले भन्ने थाहै छैन । सबै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा जिम्मेवार अधिकारीहरू हाँसेर टार्छन् ।
तैपनि वाणिज्यका सहसचिव भन्छन्, पानीजहाज किन्ने तयारी छ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैँजू भन्छन्, ‘नेपाल–भारत पानीजहाज सञ्चालन गर्ने तयारी छ । तर, पूर्वाधार विकास, आवश्यक थप समझदारी, पारवहन तथा व्यापार सन्धि पुनरावलोकन आदि काम बाँकी छन् । यस्ता प्रक्रियागत काम भइरहँदा नेपालले आफ्नै पानीजहाज भने सञ्चालन गर्न सक्छ ।
कम्तीमा कोलकातादेखि आसपाससम्म भए पनि नेपालले पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्छ । हामीले अहिले पानीजहाज किन्न प्रारम्भिक तयारी गरिरहेका छौँ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको मातहतमा रहने गरी जहाज किनिनेछ । यसका लागि कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्नेलगायत काम थालेका छौँ ।’